Matongerwo eNyika, 16 Chivabvu 2019
China 16 Chivabvu 2019
Dzimwe Nyanzvi Dzinoti VaMnangagwa Voremerwa neNyaya yeHupfumi
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa pavakadzoka kubva muhupoteri musi wa22 Mbudzi 2017 mushure mekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakavimbisa nyika kuti vaizogadzirisa hupfumi hwainge hwaenda kumawere.
Nhaurirano dzaVaMnangagwa neMapato Madiki Dzingagadzirise Hupfumi Here?
Zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nehupfumi zvaramba zvakaita manyama amire nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZanu-PF nerinopikisa reMDC kuti chii ndiyani apinza mhepo mumusha.
Vacheri veMangoda Vakawanda Vanopfurwa, Vaviri Vachifa kwaMarange
Asi mukuru wesangano reCentre for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku, pamwe nekutaura nevamwe vakapona muchiitiko ichi.
Zvizvarwa zveAmerica Zvoyambirwa Kuti Zvingwarire Kana Zvashanya muZimbabwe
Muchenjedzo idzi, America yakaudza zvizvarwa zvayo kuti muZimbabwe munoparwa mhosva dzechisimba dzakafanana nekurohwa, kupindirwa mudzimba, kana kupwanyirwa dzimotokari.
MDC Inochema Nhengo Dzakashaya Uye Kunamatira Vakakuwara Mutsaona yeMotokari
Tsaona iyi yakakuvadzawo mumiriri weGlen View South muparamende, Amai Vimbai Tsvangirai-Java, pamwe nasachigaro wemadzimai ebato muHarare West, Amai Muringani.